Izindaba - Izinguquko zengilazi yemoto
Ingilazi yemoto ifana nesambulela sethu, ibalwa ingxenye eyodwa kwezintathu yendawo engaphezulu yemoto. Akukwazi ukusivikela kuphela emoyeni nasemvuleni, kugweme ukulimala kwemisebe ye-ultraviolet, kodwa futhi kusinikeze umugqa omuhle wokubona futhi sigxile ekushayeleni. Kodwa-ke, ngokombono wemoto yonke, ingxenye esengozini kakhulu yemoto yonke kufanele ibe ingilazi yefasitela. Uma kwenzeka izingozi, ingilazi yemoto iyona ephuka kuqala. Ngakho-ke, ukubaluleka kwengilazi yezimoto kubonakala kancane kancane ngabakhiqizi bezimoto nabasebenzisi. Namuhla, uXiaobian uzokhuluma ngezinguquko zengilazi yemoto.
Kazi uyazi yini ukuthi imoto yokuqala ayizange ifakwe ingilazi
Ngakho-ke, abantu bathola ukuthi imoto ingakwazi ukushayela ngesivinini esiphansi kakhulu, ngoba izinambuzane nezinye imfucumfucu emgwaqeni zizochaphazela ebusweni bakho, futhi abashayeli nabagibeli bangasebenzisa izibuko kuphela, okuyinto engalungile kakhulu.
Kodwa-ke, ngokuthuthukiswa kwezakhiwo zemishini yezimoto, isivinini siyashesha futhi sisheshe. Ngemva kwalokho, umoya obukhali kanye nemfucumfucu endizayo ishaye ubuso bomshayeli futhi iba yinkinga enkulu kakhulu. Ngakho ngawo-1920, abenzi bezimoto banezela i-windshield ezimotweni zabo.
Lawa ma-windscreen aqala ukusikwa ngesandla engilazini eyisicaba, kodwa ngeshwa uma ingilazi iphukile, ingilazi eyisicaba izophuka ibe yizicucu ezinkulu ezibukhali eziyingozi, bese ilimaza abagibeli, okungahambisani nenhloso yasekuqaleni yokufaka ama-windscreen ukuze kuphephe. .
Ngeminyaka yawo-1930, uHenry Ford, umsunguli weFord, wathola imihuzuko emincane ngenxa yokuqhekeka kwe-windshield, okwenza abakwaFord basungula ingilazi yokuphepha ene-laminated. Wahlanganisa lezi zibuko ezimbili wazihlukanisa ngoqweqwe lwepulasitiki ukuze enze into efana nesemishi. Lo mbono uhambisana kakhulu nezidingo ze-windshield, ngoba i-interlayer yepulasitiki ingavimbela ingilazi ephukile ukuba ingaweli kubagibeli njengommese obukhali futhi ilimaze abagibeli.
Ngasekupheleni kwawo-1950, amazwe angaphandle aqala ukusebenzisa yonke ingilazi epholile njengengilazi ye-windshield yangaphambili. Kodwa-ke, kamuva kwatholakala ukuthi lapho ingilazi iphukile, izingcezu zayo yonke ingilazi epholile azikwazanga ukuqinisekisa indawo yombono womshayeli, futhi izingcezu ezincane zezinhlayiya zenza umonakalo omkhulu emehlweni, ukuze umshayeli angakwazi ukuthatha izinyathelo zokubhuleka ngokuphumelelayo. , okuholela ekuveleni kwezingozi zesibili.
Ngawo-1960, amazwe angaphandle athi kufanele kube nomkhakha othile wokubona lapho kuphuka ingilazi ye-windshield yangaphambili, futhi yonke ingilazi epholile akufanele isetshenziswe njengengilazi ye-windshield, eyanciphisa kakhulu ukulimala komuntu siqu okubangelwa ingilazi.
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zengilazi yezimoto namuhla: ingilazi elaminethiwe, ingilazi epholile kanye nengilazi yesifunda.
Imikhiqizo yengilazi eyenziwe ngezingqimba ezimbili noma ngaphezulu zengilazi eboshwe ngesendlalelo esisodwa noma ngaphezulu sezinto zokubopha ezibonisa ngale. Isici saso ukuthi ingilazi ephukile iphukile ngemuva komthelela, kodwa ngenxa yokuhlanganiswa kwayo ne-PVB enwebekayo, ingilazi e-laminated inokumelana nokungena okuphezulu futhi isengakwazi ukugcina ukubonakala. Ngokuvamile, inokuphepha okuphezulu nokushisa nokumelana nokukhanya.
Ingilazi epholile ingeyengilazi yokuphepha. Eqinisweni, iwuhlobo lwengilazi egcizelelwe. Ukuze kuthuthukiswe amandla engilazi, izindlela zamakhemikhali noma zomzimba zivame ukusetshenziselwa ukwakha ukucindezeleka okucindezelayo endaweni yengilazi. Lapho ingilazi ithwala amandla angaphandle, iqala ukwehlisa ukucindezeleka kwendawo, ukuze kuthuthukiswe umthamo wokuthwala futhi kuthuthukise ukumelana nokucindezela komoya, ukumelana nehlobo nokubanda kanye nokumelana nomthelela wengilazi.
Ingilazi ye-Zone tempered
Indawo ingilazi eqinile uhlobo olusha lwengilazi eqinile. Ngemuva kokwelashwa okukhethekile nokujeziswa, ukuqhekeka kwengilazi kusengakwazi ukugcina ukucaca okuthile lapho kuqhekekile, ukuqinisekisa ukuthi insimu yombono womshayeli ngeke ithinteke. Njengamanje, iwindshield yangaphambili yemoto yakhiwe ikakhulukazi ingilazi eqinile ene-laminated kanye nengilazi eqinile, ekwazi ukumelana nomthelela onamandla.